डोकोबाटै भोट दिएर सदाका लागी बिदा भय खड्का ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/डोकोबाटै भोट दिएर सदाका लागी बिदा भय खड्का !
डोकोबाटै भोट दिएर सदाका लागी बिदा भय खड्का !
जाजरकोटको जुनिचादे गाउँपालिका ४ का ७४ वर्षीय सार्के खड्काको शुक्रबार स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गरेको केही समयमै मृत्यु भएको छ ।
मतदानका लागि उनलाई डोकोमा मतदान केन्द्रसम्म ल्याइएको थियो । उनका छोरा भीमबहादुर खड्का जुनिचादे ४ बाट वडाध्यक्षका उम्मेदवार थिए ।
मत दिएको केही मिनेटमा नै उनको मृत्यु भएको नाति रेशम खड्काले बताए ।
भरतपुरमा प्रारम्भिक गणनामा रेणु परिन पछि
काठमाडौं । भरतपुर महानगरको प्रारम्भिक मत गणनामा यसअघिकी मेयर रेणु दाहाल पछि परेकी छिन् ।१२ मत गणना हुँदा एमालेका विजय सुवेदीले ५ मत ल्याएका छन् । रेणु दाहालले ३ मत र ४ मत बदर भएको छ ।
जसले वडाबाट अपांगता परिचय पत्रको सिफारिस पाइनन्, उनैले दिइन् मेयरमा उम्मेदवारी
अभिनेता भुवन केसी राप्रपा प्रवेश गर्ने
हामीलाई स्वतन्त्र भएर बोल्न दिने र जातिय छुवाछुत अन्त्य गर्ने नेता प्रचण्ड हुन्: चर्चित गायक राजेश पायल राइ
शिक्षकले विद्यार्थीसँग गरे यस्तो ह,र्कत, जाे देख्दा तपाईंको र,गत उ,म्लिन्छ (भिडियो सहित) समाचार